- दिनेश गौतम | मंगलबार, चैत २२, २०७८
अस्पतालमा बेड थिएन । बिरामी भुइँमा लडिरहेका थिए । कोही भेन्टिलेटर नपाएर अन्तिम सास फेरिरहेका थिए । चिकित्सकका लागि एप्रोन पनि थिएन । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एक महिनाअघि काठमाडौं लाजिम्पाटका सुदन गुरुङले देखेको कहालीलाग्दो दृश्य हो यो । उनी काम विशेषले झापा गएको क्रममा बिरामीलाई सहयोग गर्न बीपी प्रतिष्ठान पुगेका थिए । ‘रति १ बजे अस्पताल पुग्दा त्यहाँको बिजोग देखेर तर्सिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘भेन्टिलेटर नपाएर मानिस अस्पतालको भुइँमा मरिरहेका थिए ।’
हामी नेपाल संस्थाका संस्थापक समेत रहेका सुदनले तत्कालै निर्णय गरे, ‘अस्पताललाई बेडलगायतका अत्यावश्यक सामग्री सहयोग गर्ने ।’ हामी नेपालले अन्य सरकारी अस्पतालहरूमा पनि अत्यावश्यक सामग्री सहयोग गर्दै आएको छ ।
बीपी प्रतिष्ठानलाई पनि सहयोग गर्ने निर्णय गरेर उनी झापा फर्किए । तीन-चार दिन झापामा बसेर उनले आफ्नो काम सकाए । काम सकिएपछि उनी काठमाडौं फर्किनु पर्ने हो तर उनको मन काठमाडौं फर्किन मानेन । उनी बीपी प्रतिष्ठानतर्फ लम्किए ।प्रतिष्ठान पुगेर उनले केही डाक्टरहरूलाई सोधे, ‘यहाँ सहयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’ ‘कमिसनको कुरा आउँछ । तपाईंले सहयोग गर्‍यो भने यहाँ खरिद कसरी हुन्छ ? यही समस्या देखाएर त पैसा आइरहन्छ उनीहरूले खाइरहन पाउँछन्,’ ती चिकित्सकको जवाफले सुदन रन्थनिए ।
सहयोग गर्न प्रतिष्ठान पुगेका उनले निर्णय बदले, ‘अहिलेको आवश्यकता प्रतिष्ठानलाई बचाउनु हो ।’ तर, बचाउने कसरी ? उनी स्थानीय, प्रतिष्ठानका कर्मचारी, चिकित्सक र विद्यार्थीसँग छलफल गर्न थाले । ‘प्रतिष्ठानको जर्जर अवस्था देखेर न स्थानीय खुसी थिए, न अस्पतालका चिकित्सक, कर्मचारी न विद्यार्थी नै । कोही पनि सन्तुष्ट देखिएनन्,’ उनी भन्छन् ।
२० दिन धरानमै बसेर उनले प्रतिष्ठान अधोगतिमा लाग्नुको कारण पहिल्याए । उनको अध्ययनले चिनोड निकाल्यो, ‘सुधारका लागि आन्दोलन पनि धेरै भएको रहेछ । तर, सम्झौता हुने कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी रहेछ । प्रतिष्ठानको नेतृत्वले जनतालाई चुस्ने काम मात्र गरेको रहेछ ।’
अब के गर्ने त ? यो प्रश्न बोकेर उनी काठमाडौं फर्किए । काठमाडौं आएर उनले आफ्नो टिमलाई सबै फेहरिस्त सुनाए । टिमले निर्णय गर्‍यो, ‘धरानमै गएर प्रतिष्ठान बचाउ आन्दोलन गर्ने ।’ सुदनको नेतृत्वमा काठमाडौंबाट विधान श्रेष्ठ र श्रृष्टि श्रेष्ठ पनि धरानतर्फ लागे । शनिबारबाट उनीहरूको नेतृत्वमा ‘घोपा बचाउ’ आन्दोलन सुरु भएको छ । ‘आफ्नो सबै काम छोडेर काठमाडौंबाट धरान आएका छौँ,’ सुदन भन्छन्, ‘हाम्रो आन्दोलनमा स्थानीयहरू पनि आउनु भएको छ । कुनै पार्टीको झण्डा छैन । सबैको एउटै माग हो घोपा बचाउनु,’ उनी भन्छन् ।
अनि जुर्मुराए धरानवासी
प्रतिष्ठान शुद्धीकरणको माग राखेर प्रतिष्ठान संघर्ष समितिले आन्दोलन नगरेको पनि होइन । ८ महिना बित्यो समितिले आन्दोलन थालेको । सरकारसँग पटक-पटक सम्झौता पनि भयो । तर, कार्यान्वयन भएको छैन । यो पटकको आन्दोलन पृथक छ । कारण हो काठमाडौंबाट गएका युवाहरूले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । अनि यसपटक जुर्मुराएका छन् धरानवासी पनि । उनीहरू उधारो सम्झौता गर्ने पक्षमा छैनन् ।
‘एउटा एमआरआई मेसिन आयो भने एउटा माग पूरा भयो । इमरजेन्सी राम्रो बनाउनु पर्‍यो । पारदर्शी ढंगबाट खरिद गरेको सामानको विवरण वेबसाइटमा राख्नु पर्‍यो,’ सुदन भन्छन्, ‘अहिलेसम्मका पदाधिकारीहरूले गरेको भ्रष्टाचारको छानबिन गररी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्‍यो ।’
हामी नेपाल संस्थाका टिमहरू ।
उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी दोषी कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने, बैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वले तयार गरेको समस्या पहिचान तथा छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदन लागू गर्नुपर्ने र हालका पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ । यी माग सरकारले कार्यान्वयन नगरेसम्म काठामाडौं नफर्किने उनीहरूले घोषणा गरेका छन् । ‘नेपाली युवा भएको नाताले चिन्ता लागेर धरान आएका हौँ । प्रतिष्ठान रहेन भने धरानको अस्तित्व रहँदैन । यो पटक खुट्टा कमाउने पक्षमा छैनौँ । अन्तिमसम्म लडाइँ लड्छौँ । माग कार्यान्वयन नभएसम्म काठमाडौं फर्किनेवाला छैनौँ,’ उनी भन्छन् ।
यसअघि के-के भएको थियो ?
बीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई सिनेटबाट हटाइने, समितिले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन
बीपी प्रतिष्ठानमा बेथिति : अप्रेसन गर्न बिरामी महिनौँ कुर्न बाध्य, उपचारकै क्रममा दुर्घटना हुने स्थिति
काउन्सिल रिपोर्ट: बीपी प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवा अत्यन्तै नाजुक, प्रतिदिन २० जना बिरामी अन्यत्र रिफर
बीपी प्रतिष्ठानको फार्मेसीमा पाइँदैन औषधि, एमआरआई गर्न बिर्तामोड पुग्छन् बिरामी
बीपी प्रतिष्ठान: सरकारको आग्रहपछि संघर्ष समितिले बदल्यो आन्दोलनको स्वरुप
बीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति गिरी प्राध्यापक नभएको पुष्टि
सरकारले भन्यो, ‘बीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको कारबाही प्रक्रिया सिनेटबाट अगाडि बढ्छ, आन्दोलन फिर्ता लिनू’
बीपी प्रतिष्ठान : जताततै अनियमितता, स्वास्थ्य सेवा भद्रगोल
चाउचाउ र बिस्कुटको भरमा पढ्छन् बीपी प्रतिष्ठानका विद्यार्थी
बीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति गिरीको योग्यतामाथि उठ्यो प्रश्न, ७ दिनभित्र कागजात पेश गर्न समितिको सुझाव [प्रतिवेदनसहित]
बीपी प्रतिष्ठान आन्दोलन : सरकारले किन कार्यान्वयन गरेन सम्झौता ?
बीपीमा ८३ दिनदेखि आन्दोलन : माग पूरा गर्न सरकारले देखाएन चासो, चिकित्सक तथा कर्मचारीद्वारा सेवा बहिष्कार
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अख्तियारको छापा
बीपी प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचारको प्रश्न उठाउने डाक्टरलाई कारबाहीको चेतावनीसहित उपकुलपतिले साेधे स्पष्टीकरण
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २२, २०७८, १८:१४:००